Asa tanana - Asa tanana | Asa-tanana (Pejy 5)
Ahoana ny famonosana pataloha
Efa manakaiky ny Noely, efa mieritreritra ny fanomezana homenao ianao, anio dia manolotra hevitra aho: ny fomba famonosana ny pataloha sasany ho fanomezana.
DIY ny fomba manokana ny kahie
Raha tianao kahie dia tianao ity fampianarana ity !!! Haneho anao DIY aho: ny fomba fanamboarana kahie mba hitiavanao azy.
Fomba fanamboarana hazo krismasy haingon-kazo miaraka amin'ny tsorakazo sy baoritra
Amin'ity lesona ity dia hasehoko anao ny fomba fanamboarana hazo krismasy haingo mora sy maoderina. Izy io dia tany am-boalohany ary afaka manao izany mora foana ianao.
DIY: Siny ho an'ny infusions
Androany aho mitondra anao DIY vaovao: hanao siny kely ho an'ny fampidiran-dra izahay. Manararaotra siny fitaratra sasany hanovana azy ireo ho siny fampidirana.
DIY Halloween ramanavy
Hanao asa tanana tsotra be izahay, miaraka amina tweezers dia hanaovantsika ramanavy amin'ny Halloween, amin'ny dingana telo ary ao anatin'ny dimy minitra.
Trano kely misy gnome, goblins na matoatoa
Manamboara gnome, elf na matoatoa ity trano kely ity hamenoana nofinofy ny efitran'ireo ankizy sy handravahana ny tantaran'izy ireo
Kiraro zazakely ho an'ny Baby shower
Ianaro ny fomba fanaovana fanomezana am-boalohany amin'ny fandroana zaza. Ahoana ny fomba hanaovana kiraro zazakely ho fahatsiarovana.
Manodina ny fitoeran-kapoaka izahay
Amin'izao asa tanana ankehitriny izao dia takianay amin'ny firaketana firapotsy sasany ho toy ny singa haingon-trano ho an'ny zoron'ny tranonay, ary mamadika azy ho voatavo.
Tena mora fanodinana labozia misy kapoaka sy yaourt
Ianaro ny fomba fanaovana ireo fitoeran-dabozia ireo kaontenera sy yaourt. Hevitra azo ampiharina sy mora ary ny vokatra dia mahafinaritra ho an'ny zorony rehetra ao an-tranonao
Mahatsiaro voninkazo handravaka ny asa-tananao DIY
Ianaro ny fomba fanaovana ireo voninkazo tsapa ireo ho tonga lafatra handravaka ny asa tanana rehetra tadidinao, tsara.
Mpizaha maso be rà handravaka ny Halloween
Ianaro ny fomba fanamboarana ireo morontsiraka Halloween manana maso feno rà ireo, tonga lafatra amin'ny fanaingoana ny latabatrao amin'ny fety mahatsiravina.
DIY: fonony lalao
Anio no asehoko anao DIY vaovao: manarona ny filalaovana lalàna, asa-tanana tena azo ampiharina mba hananana ny fitsipika mifehy sy jerena.
Ianaro ny fomba fanamboarana ireto harona vatomamy Halloween ireto ho an'ny ankizy kely mba hangataka vatomamy be dia be ary hahafinaritra be azy ireo.
Haingo: Tutorial ho an'ny Pennant
Amin'ity hevitra haingo ity dia ho hitantsika ny fomba hanamboarana penily malaza kokoa handrafetana ny anarana sy hanatsarana ny santionan'ny penily.
Baoritra tena totozy sy totozy mora be
Ianaro ny fomba fanaovana an'ireto totozy ireto miaraka amin'ny fingotra eva sy baoritra handravahana ny efitry ny kely indrindra amin'ny trano, dia tena izy ireo.
Ahoana ny fomba hanaovana karatra Halloween
Raha te hampiaiky volana an'ity Halloween ity ianao dia zarao ireo karatra Halloween ireo dia hahagaga anao ireo vahininao. Mariho ny dingana tsikelikely.
Voatavo haingon-trano DIY
Amin'ity DIY ity dia afaka manamboatra antsipirihany ho an'ny tranonao ianao, ho hitantsika ny fomba fanamboarana voatavo haingon-trano izay mety tsara ho anao ireo andro Halloween ireo.
Saka mainty eva mainty handravahana ny fetinao Halloween
Ianaro ny fomba fanaovana an'io saka mainty tonga lafatra mainty tonga lafatra io handravahana ny lanonanao Halloween, dia ho tsara tarehy izany na amin'ny zoron'ny tranonao aza.
Ny ramanavy handravahana ny fety Halloween anao tena mora
Ianaro ny fomba fanaovana an'io ramanavy io, mety handravahana ny fety Halloween anao mba hampatahotra ny manodidina anao ny tranonao.
Fomba fanamboarana boribory keychain
Amin'ity lesona anio ity dia ho hitantsika ny fomba fanamboarana ny boriborintany ho an'ny keychain tena mora sy tsotra ary miaraka amin'ny valiny izay hahagaga anao.
Fomba fanaovana voninkazo tariby handravahana vilany
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba famoronana voninkazo tariby handravahana vilany ary hanome azy ireo fikitika mahafinaritra sy tany am-boalohany. Atambaro ny loko ary mamorona voninkazo an'arivony.
Mamorona vazy amin'ny alàlan'ny fanodinana tavoahangy fitaratra
Amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny hevitra hamoronana vazy amin'ny alàlan'ny fanodinana tavoahangy fitaratra. Handahatra ny tavoahangy izahay ary hametahana decoupage.
Karatra Halloween voatavo tena mora
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity karatra Halloween ity miaraka amin'ny voatavo tonga lafatra ho an'ny asa tanana miaraka amin'ny ankizy sy amin'ny fety mahatsiravina
Amin'izao DIY anio izao dia ho hitantsika ny fomba fanaovana bracelet fatotra. Toa sarotra be izany, saingy mila manaraka fika vitsivitsy fotsiny ianao,
Kraft arts. Kitendry keychain
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity keychain keychain miorina amin'ny cookie ity miaraka amin'ny rubber eva tena mora. Ny vokatra dia tsara tarehy, tena tany am-boalohany ary haingana dia haingana ny hanaovana.
Satroboninahitra ho an'ny tsingerintaona nahaterahan'ny ankizy
Tsy misy tsara tarehy kokoa noho ny mandany tolakandro milalao miaraka amin'ny ankizy, ka anio dia manome anao hevitra tena izy izahay, ny fomba hanaovana satroboninahitra kely ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy
Ahoana ny fomba hanaovana bracelet kofehy efatra
Amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba famoronana brasele kofehy efatra. Mora noho ny nieritreretanao azy io, satria miverimberina foana io lamina io.
Amin'ity DIY ity dia afaka manamboatra tsoratadidy na tsoratadidy amin'ny dingana vitsivitsy amin'ny fomba mora sy fitaovana vitsivitsy ianao.
Mpihazona naoty. Asa tanana tena mora
Miaraka amin'ity mpihazona fanamarihana vita amin'ny hazo sy fingotra eva ity dia tsy hohadinoinao ireo zavatra tokony hataonao. Toa tsara ny manaingo ny vata fampangatsiahana anao
Fomba fanaovana bracelet misy bokotra
Amin'ity asa tanana androany ity dia asehoko anao ny fomba fanaovana brasele misy bokotra ao anatin'ny dimy minitra fotsiny, mora be ny manao azy ary misy fitaovana vitsivitsy.
Fomba fanamboarana tsoratadidy Ballerinas - Asa tanana ho an'ny ankizy
Amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba famoronana tsoratadidy ballerina mahatsikaiky vita amin'ny fitaovana mora vidy sy lafo. Lavorary atao amin'ny ankizy.
Fomba fanamboarana rojo misy vakana tanimanga tsikelikely
Amin'ity lesona ity dia mampianatra anao aho amin'ny fomba famoronana rojo misy vakana tanimanga, manana fahafaha-manao famolavolana an'arivony ianao, tena vita tanana io ary afaka mamorona ny tenanao ianao.
Fomba fanamboarana labozia voaravaka napkin
Raha te handravaka labozia ny tranonao ianao, dia jereo fa mora ny mandravaka labozia ary avelao ho tena izy tany am-boalohany, nandoko tamin'ny servieta
Ahoana ny fomba handravahana kahie amin'ny Hama Beads (miaraka amina modely)
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba handravahana kahie amin'ny Hama Beads izay hanome fiainana sy fifaliana azy. Miomàna hiverina any an-tsekoly ary mamorona kahie tany am-boalohany.
Androany isika dia handahatra ny kahie ary hanome azy io fijerintsika manokana izay tiantsika, amin'ny fomba mora sy fitaovana vitsivitsy.
Manaova ambainy tsikelikely
Amin'ity asa tanana androany ity dia hanao ambainy tsikelikely isika, amin'ny fomba tsotra, saingy miaraka amina fikitihana kanto amin'ny valiny farany.
Taratasy volafotsy ho an'ny asanao
Ny asa tanana androany dia tena tsotra, fa azo ampiharina ... anio dia hasehoko anao ny fomba fanaovana litera volafotsy ho an'ny ...
Latabatra misy taratasy vita amin'ny lamba - Teknika famoahana
Raha te handravaka ny efitranonao amin'ny fomba tany am-boalohany ianao dia aza hadino ny dingana tsikelikely hanaovana sary hosodoko miaraka amin'ny litera lamba, amin'ny fampiasana ny teknika decoupage.
Ahoana ny fomba hanaovana garlandy voankazo
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba fanamboarana garlanda voankazo izay hanazava ny zorony rehetra, fa tonga lafatra ihany koa ho an'ny fety sy haingon-trano eo am-baravarankely.
Ahoana ny fomba fanaovana banky piggy amin'ny alàlan'ny fanodinana tavoara fitaratra
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana piggy banky amin'ny alàlan'ny fanodinana tavoara fitaratra amin'ny fomba mora sy lafo, miaraka amin'ny valiny izay hahagaga anao.
Ahoana ny fomba fanaovana lovia haingon-trano amin'ny tanimanga polimer
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba famoronana lovia tanimanga polimer amin'ny haingo amin'ny fomba tena mora. Mahafinaritra azy ireo ny mamela lakile, firavaka, vola ...
Manao farango izahay
Amin'ity asa tanana androany ity dia hanao farango ho an'ny akanjo Captain Hook isika, izay ankoatra ny fahafinaretana dia hanangona vola isika.
Sofina lavender DIY
Katsaka DIY amin'ny sombin-kazo lavender asa tanana tena mora ampiasaina ho toy ny toerana sy ho anti-samoina apetraka ao anaty lalimoara.
Candy vatomamy misy kaopy plastika
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity boaty vatomamy miendrika monstera ity ho an'ny fety Halloween na fotoana manokana. Azo antoka fa tianao izany.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny fanaka iray
Hanavao ny tranonao amin'ity tutorial ity momba ny fomba famerenana manamboatra fanaka iray. Asa tena tsotra sy mora vidy hatao.
Tompon'ny labozia manodina fanary
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny dingana tsirairay hanamboarana fitoeram-labozia fanodinana lakandrano fitehirizana. Ho fanampin'ny fanodinana entana dia afaka mandravaka amin'ny dingana vitsivitsy isika.
Harona misy kaopy plastika tena mora
Ianaro ny fomba fanaovana ireto harona ireto amin'ny kaopy plastika amin'ny fotoana manokana na fety ataon'ny ankizy. Ny valiny dia tena tany am-boalohany.
Fomba fanaovana pensilihazo miendrika kankana - Miverina any an-tsekoly manokana
Amin'ity fampianarana ity dia hianaranao ny fomba famoronana pensilihazo miendrika kankana, tonga lafatra azo atao amin'ny ankizy, ary amin'izany dia ampirisiho izy ireo hiverina any am-pianarana nandrasana hatry ny ela.
Boaty miendrika voninkazo
Tsy misy tsara tarehy kokoa noho ny mamela ny vahininao ho afa-po, satria ity torolàlana momba ny boaty miendrika voninkazo ity dia mety tsara ho fahatsiarovana fahatsiarovana
Ahoana ny fomba hanaovana rojo vorondoloho amin'ny tanimanga Fimo na polymer
Amin'ity lesona ity dia mampianatra anao aho ny maodely keychain vorondolo miaraka amin'ny tanimanga Fimo na polymer, ho an'ireo izay tia vorondolo ary te hitondra azy hatraiza hatraiza.
Ahoana ny fomba hanaovana pompom
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana pompom handravahana fety, latabatra sonia na latabatra mamy.
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana fo voaravaka amin'ny baoritra.
Andriamby frosted ho an'ny fahavaratra
Ianaro ny fomba handravahana ny vata fampangatsiahana ataon'ireo andriamby fahavaratra amin'ny endrika gilasy. Mora be ary ny valiny araka ny hitanao dia tsara!
Fomba fanamboarana hanger misy litera 3D mora sy haingana
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba famoronana hanger misy litera 3D, tsara ho an'ny efitranon'ny ankizy, ampio ny fiandohan'ny loko kely indrindra sy mamirapiratra.
Fomba fanamboarana penina voaravaka
Amin'ny asa tanana ankehitriny dia ho hitantsika ny fomba fanaovana penina voaravaka amin'ny dingana vitsivitsy monja.
Ahoana ny fomba fanaovana sary haingon-trano ho an'ny efitrano zaza
Raha manaingo ny efitranon'ny zazakelinao ianao dia jereo ireo dingana tsikelikely mba hanaovana sary haingon-trano ho an'ny efitran-jazakely
Banner handravaka latabatra mamy
Androany isika dia hahita asa tanana tena tsotra nefa tena manintona, ho hitantsika tsikelikely ...
Fomba fanamboarana mofomamy Fimo kely na tanimanga polimer
Amin'ity lesona ity dia mampianatra anao aho ny maodely mofomamy fimo na tanimanga polimer izay ho tsara tarehy toy ny keychain, andriamby na kilalao ho an'ny lakozian'ireo ankizy.
Rojo pendant misy kapsula kafe
Ianaro ny fomba hamerenany ny kapsola kafe ary avadika ho pendant sarobidy io mba hanambatra azy amin'ny akanjo anananao.
Ahoana ny fomba fanaovana sifotra handravahana vilany
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny dingana tsikelikely hamoronana sifotra mahafinaritra handravahana vilany. Ataovy miloko maro izy ireo, hanome fiainana ny zavamaniry anao.
Amboary ny kahie
Androany dia ho hitantsika ny dingana tsirairay hanaingoana ny kahie ary avelao ho araka ny itiavantsika azy
DIY: varavarana Fairy nify
Amin'izao asa-tanana anio izao dia hasehoko anao DIY: ny varavaran'ny angano nify, mba hahafahantsika mametraka azy ao amin'ny efitr'ilay kely izay ho faty ny nifiny, ho hitanao ny fiheverana mahatonga azy .
Cupcakes asa tanana tena mora ho an'ny ankizy
Muffins na cupcakes dia tsindrin-tsakafo iray izay tato ho ato dia nanome zavatra betsaka horesahina. Afaka ataontsika…
Fomba fanamboarana fehezam-boninkazo misy dantelina
Raha mila asa tanana faran'izay marefo ianao handravahana ny tranonao na ny fitsingerenan'ny andro nahaterahanao, dia mianara manaova fehezam-boninkazo miaraka amin'ny doily.
Fomba fanaovana afrikanina amin'ny alàlan'ny fampiasana tavoahangy fitaratra indray
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba fanamboarana tarehimarika afrikanina tsikelikely amin'ny alàlan'ny fampiasana tavoahangy fitaratra indray. Amin'ny alàlan'ny lesona an-tsary dia ho hitanao fa tena mora izany.
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana karatra firariana amin'ny fomba mora sy tsotra.
Fomba fanaovana kitapo fahatsiarovana mandritra ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana
Ianaro ny fomba fanaovana kitapo fahatsiarovana fitsingerenan'ny andro nahaterahana amin'ny fomba haingana sy haingana ary tsy lafo. Jereo ny dingana tsirairay tsikelikely.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoko anao ny fomba fanamboarana ity felam-boninkazo na felam-boninkazo miloko avana ity ho tonga lafatra handravahana ny zorony rehetra ao an-tranonao ary hanome azy io fikitika tena izy.
Ahoana ny fomba handravahana ireo fandaharam-potoana amin'ny Washi Tape
Raha te-hanaingo manokana ny fandaharam-potoananao ianao na hanao fanomezana tena lehibe, ampiasao ny Washi Tape, eto dia asehonay anao ny fomba handravahana ireo fandaharam-potoana amin'ny Washi Tape.
Ahoana ny fomba anaovana labozia styrofoam cone
Amin'ity lesona ity dia hianaranao ny fomba famoronana mpihazona labozia misy kôly styrofoam, mety indrindra amin'ny fametrahana labozia lava sy handravahana ny zoro rehetra.
Tsoratadidy hazo taratasy
Ataovy amin'ny taratasy ity tsoratadidy miendrika hazo ity. Hevitra tsara hampiasaina indray ny fitaovanao amin'ny scrapbooking sy ny taratasy.
Ahoana ny fomba hanaovana rakitsary sary technique technique scrapbook
Tehirizo ao anatin'ity rakitsary sary teknika Scrapbook mahafinaritra ity izay asehonay anao tsikelikely. Sombiny tsara omena ho fanomezana.
Fomba fanaovana boaty vatomamy ho an'ny fety sy fankalazana
Amin'ity fampianarana ity dia hianaranao ny fomba famoronana boaty vatomamy na sôkôla tonga lafatra homena ny vahininao amin'ny fety na fankalazana. Miaraka amin'ny maodely.
Fomba fanamboarana bolongam-panoratana
Amin'ity fampianarana ity dia hianaranao ny fomba hamoronana lovia fanaovana pirinty mora sy lafo vidy. Manana valiny tena tsara izy ireo, mahatohitra izy ireo ary tsy lafo.
Fomba fanamboarana tsipìka mora
Amin'ity fampianarana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana tsipìka mora foana mba ho tsara tarehy amin'ny voalohany ary azontsika ampiasaina amin'ny asa-tanantsika rehetra.
Fomba fanamboarana sifotra mihazona naoty miaraka amin'i Fimo
Amin'ity lesona ity dia hianaranao ny fomba hamoronana sifotra mpihazona naoty vita amin'ny tanimanga Fimo na polymer. Sary haingo ary ilaina ihany koa.
Ahoana ny fomba fanaovana tsoratadidy
Ianaro ny fomba fanaovana tsoratadidy, hevitra fanomezana tsara na handravahana ny boky tianao indrindra. Aza adino ny dingana tsikelikely.
Ahoana ny fomba fanaovana bracelet
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana bracelet amin'ny fomba mora azon'ny ankizy atao sy ahafahany manao hetsika miaraka amin'izy ireo amin'ity fahavaratra ity.
Fomba fanamboarana kavina amin'ny tapa-kazo
Amin'ity lesona ity dia azonao atao ny mahita ny tsikelikely hanamboarana ny kavina anao amin'ny hazo na hazo. Manana fahafaha-manao famolavolana be dia be ianao.
Hevitra 3 hanaovana fanaovana haingon-trano
Amin'ity lesona ity dia manome anao hevitra telo aho, miandalana sy horonan-tsary mba hamoronana baolina haingo amin'ny fomba sy teknika samihafa. Safidio izay mety indrindra aminao.
Ho hitantsika tsikelikely ny fanaovana bracelet ho an'ny zazalahy ao anatin'ny minitra vitsy, mora atao, nefa tena mahomby.
Ahoana ny fomba fanaovana cone-taratasy
Mba hahombiazan'ny antokoo dia hasehoko anao ny fomba fanaovana konona taratasy ho fanomezana ho fahatsiarovana amin'ny karazana hetsika rehetra.
Fehin-tànana mora ao anatin'ny roa minitra
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana bracelet mora amin'ny ankizy ao anatin'ny roa minitra ary hanehoana saribakoly mahafinaritra amin'ity fahavaratra ity.
Tompon'ny labozia misy solomaso
Fomba fanamboarana mpihazona labozia amin'ny alàlan'ny fanodinana solomaso vitsivitsy, fanomezana rivotra madio sy feno fitiavana ho azy ireo, mba hametrahana zoro amin'ny fotoana manokana.
Hoso-doko lolo ho an'ny ankizy
Ianaro ny fomba handravahana ny akanin-jazavavy amin'ny takelaka plastika tsotra. Gaga ianao ny vokany.
Fomba fanamboarana rojo vy pom pom keychain
Tsikelikely mba hanamboarana rojo vy miaraka amin'ny pompom volon'ondry handravahana kitapo, poketra na ny lakileninao fotsiny.
Hanao vazy ambanivohitra izahay amin'ny alàlan'ny fanodinana divay iray tavoahangy. Azo ampiasaina handravahana ny zoron-trano rehetra izy io.
Miaraka amin'ny tehina hazo, amboary ity fiaramanidina ity tany am-boalohany ary mora toy izany ho an'ireo ankizy kely ao an-trano mba hanana fotoana mahafinaritra.
Amin'ity lesona ity dia hianaranao ny fomba famoronana UFO miaraka amin'ny fitaovana mora vidy sy mora vidy. Mora be ny manao azy ary samy haingon-trano sy kilalao.
Tompon'ny labozia manitra
Andao hojerentsika ny fomba fanamboarana labozia manitra Ity asa-tanana ity izay tena mora atao ary singa haingo tena tsara:
Ahoana ny fomba fanaovana rojo rojo
Raha te-hanao firavaka iray tena izy sy tsy manam-paharoa ianao dia aza hadino ity fampianarana ity, izay hasehonay anao ny fomba fanaovana rojo tadim-poitra.
Fonosana amin'ny valopy
Amin'ity asa tanana androany ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana fonosana misy valopy amin'ny fomba mahafinaritra sy am-boalohany ary ao anatin'ny fotoana fohy.
Lolo misy horonana taratasy fidiovana
Ianaro ny fomba hanodinana ireo horonana taratasy fidiovana ary ahodina ho lasa lolo tsara tarehy ity.
Ho hitantsika ny fomba fanaovana marika pejy manokana amin'ny karatra roa fotsiny, amin'ny fomba mora sy tsotra, tonga lafatra amin'ny fanaovana fanomezana.
Fomba fanamboarana fitoera labozia manjelanjelatra
Izahay dia mizara aminao, ny fomba fanamboarana fitoera labozia manjelanjelatra handravahana ireo afovoany na tontolo iainana ao an-tranonao, jereo ny dingana rehetra.
Kahie ho an'ny ankizy
Hanao kahie kely ho an'ny ankizy izahay, amin'ny fomba mora sy tsotra, ny zavatra tsara indrindra dia ny azon'ny kely indrindra amin'ny trano atao.
Ahoana ny fomba volontsôkôlà baolina hazo
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba manamboatra baolina hazo ary manova tanteraka ny endriny, hahatratra ilay irina.
Kitapo fo ho an'ny fety
Ianaro ny fomba fanaovana ireo kitapo fonosana ireo ho an'ny fety ankafizin'ny kely indrindra amin'ny trano. Tonga lafatra amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana sy amin'ny fotoana rehetra.
Fehin-tànana misy baolina telo
Amin'ity asa tanana ankehitriny ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana bracelet tsara tarehy miaraka amin'ny baolina telo, amin'ny fomba mora sy haingana.
Ahoana ny fomba hanaovana karatra amin'ny Washi Tape
Anio dia hasehonay anao ny fomba fanaovana karatra amin'ny Washi Tape. Mahafinaritra foana ny manome fanomezana nataonao, aza hadino ny dingana tsikelikely.
Caterpillars misy clip sy pompom
Ianaro ny fomba fanamboarana ireo bibikely mahafatifaty ireo amin'ny pompom sy paompy fotsiny. Ho tsara ny valiny. Sahy ve ianao ??
Ahoana ny fomba hanaovana trivet amin'ny hazo fisaka
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba famoronana trivet amin'ny hazo fisaka. Ary mba handravahana azy dia azonao atao koa ny mianatra mampihatra ny teknikan'ny decoupage.
Fomba fanaovana tic-tac-toe mora sy mora vidy
Amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba famoronana tabilao misy taila ho an'ny iray amin'ireo lalao filalaovana malaza indrindra, ny tic-tac-toe. Volavola araka izay itiavanao azy indrindra.
Kitapo azo averina ampiasaina amin'ny pincushion
Androany aho dia mitondra asa tanana ho anao, izay ankoatry ny fanodinana entana, dia tena ilaina amin'ny asa fanjairana ataontsika: andao hojerentsika ny fomba fanovantsika lakandrano voaverina ho lasa pincushion, amin'ny fomba mora sy tsotra.
Ianaro ny fomba fanaovana an'ireny biby goavam-be ireny ho an'ny ankizy. Azo antoka fa tena tian'izy ireo izany ary mahafinaritra ny fotoana. Mora be izy ireo.
Kitapo souvenir ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana
Izahay dia mizara fampianarana mba hanao kitapo fahatsiarovana fitsingerenan'ny andro nahaterahana, miaraka amina mould, ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana izay mora ihany koa ary tsy lafo.
Fomba fanaovana tsipìka volo
Atorinay anao ny dingana tsirairay amin'ny fomba fanaovana tsipìka tadivavarana ho an'ny volo, amin'ny fomba mora, mora ary haingana. Mety handravaka ny taovolo.
Fomba fanamboarana morontsiraka morontsiraka mozika
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba hamoronana morontsiraka manahaka ny mosaic. Mora sy haingana atao, ary misy safidy maro hamolavolana azy ireo.
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana fehin-tànana ho an'i Neny ary afaka hanome azy zavatra iray izay nataonay tamin'ny Fetin'ny Reny.
Ahoana ny fomba hanaovana cookies cookies
Ianaro ny fomba fanaovana ireo cookies malaza momba ny harena be dia be, mety amin'ny fanomezana ary ampiasaina ho fahatsiarovana fitsingerenan'ny andro nahaterahana.
Tsoratadidy ho an'i Neny
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana tsoratadidy ho an'i Neny, izay ho tsara homena azy amin'ny Fetin'ny Reny.
Vilany voaravaka tanimanga hanaovana fanomezana
Amin'ity lesona ity dia hampianariko anao ny fomba famoronana tavoara voaravaka tanimanga polymer hampiasaina ho fonosana tany am-boalohany ho an'ny fanomezana kely rehetra.
Karatra ho an'ny fetin'ny reny
Ho hitantsika tsikelikely ny fanaovana karatra ho an'ny Fetin'ny Reny amin'ny fomba mora mba hahafahan'ny kely ao an-trano manamboatra azy
Magnets miaraka amin'ny tapa-kazo homena amin'ny fetin'ny reny
Izahay dia mizara hevitra tany am-boalohany mba homena amin'ny Fetin'ny Reny, ny fomba fanaovana andriamby amin'ny paompy
Ahoana ny fomba hanaovana satroboninahitra voninkazo misy lasitra cupcake
Amin'ity lesona ity dia hitanao ny dingana tsikelikely hamoronana satroboninahitra voninkazo misy lasitra cupcake. Lavorary handravahana ny efitrano rehetra amin'ny lohataona.
Mandamina ny kasety izahay
Miaraka amin'ity hafetsifetsen'ny fandaminana ity dia mandamina ny kasety izahay ary omenay azy ireo ho hitady azy ireo fa tsy hifangaro amin'ny hafa.
Fomba famoronana bera voninkazo vita amin'ny tanimanga fimo na polymer
Tsikelikely mba hamoronana orsa tsara tarehy miaraka amin'ny voninkazo vita amin'ny fimo na tanimanga polimer, tonga lafatra amin'ny haingo na mameno zavatra haingo sy fanomezana.
Ahoana ny fanamboarana fonosana fanomezana amin'ny fetin'ny reny
Ianaro ny fomba fanaovana fonosana tsara tarehy sy tany am-boalohany mba hahagaga ny Fetin'ny Reny, amin'ny fomba mora sy ekonomika.
Firavaka fanomezana voninkazo.
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity firavaka kanto ity mba handravahana ireo fanomezana. Tena mora izy io ary tsara tarehy.
Fehin-tànana kofehy kofehy T-shirt
Amin'ity lesona anio ity dia ho hitanao ny dingana tsikelikely mba hanaovana fehin-kofehy kofehy t-shirt amin'ny alàlan'ny fampiasana indray ny akanjo.
Fomba fanaovana fahatsiarovana vatomamy
Ahoana ny fomba fanaovana souvenir miendrika vatomamy, tena tany am-boalohany, mety amin'ny tsingerintaona nahaterahan'ny ankizy.
Famaritana marika na marika
Ianaro ny fomba fanaovana ireo label na scrapbooking easy ireto ho mora. Mahavariana izy ireo !!!
Castle of diapers, dia antsipiriany iray tany am-boalohany homena ny zaza vao teraka, satria ankoatry ny fanomezana hafa, ...
Fomba fanamboarana Nemo amin'ny tanimanga Fimo na polymer
Mianara amin'ity fampianarana ity mba hanahafana ny toetra Nemo avy amin'ny tanimanga Fimo na polymer. Tsara ampiasaina ho kilalao ho an'ny ankizy kely na ho haingon-trano.
Ahoana ny fanaovana lolo tsapa
Fampianarana hanamboatra lolo tsapa, hampiasaina ho fahatsiarovana fitsingerenan'ny andro nahaterahana na handravahana ny efitranonao.
Ivotoerana ho an'ny Paska
Izahay dia efa ao anaty fety feno ary hasehoko anao ny fomba mora anaovana ivon'ny ...
Fomba fanamboarana karaoty ho an'ny Paska
Haneho asa tanana tsara tarehy vita amin'ny lamba aho, izay tian'ireo ankizy kely ao an-trano, ho hitantsika ny fomba hanamboarana karaoty ho an'ny Paska. Ary amin'izany mankalazà ny fahatongavan'ny Paska.
Ahoana ny fomba hanaovana Bunny Paka
Tsy hisy sisa intsony hankalaza ny fetin'ny paska sy handravaka ny tranontsika anio dia hanolotra iray ...
Ahoana ny fomba fanaovana harona Paska
Fomba fanamboarana sobika fanomezana ho an'ny Paska, amin'ny baoritra fotsiny, mora sy mora azo.
Fampianarana medaly ho an'ny andron'ny ray
Mbola kely sisa tavela ho an'ny Fetin'ny ray, ary raha mbola tsy nahita asa tanana hatao ...
Hanao asa tanana tena mora sy azo ampiharina isika: ho hitantsika ny fomba hamadihana ny siny Pringles ho siny cookie.
Fomba fanamboarana vorona Angry mena miaraka amin'i Fimo
Amin'ity lesona ity dia ho fantatrao ny fomba fanaovanaorona Angry Bird mena miaraka amin'i Fimo, miaraka amin'ireo dingana tsirairay isaky ny ampahany amin'ilay sary.
Ahoana ny fomba fanaovana fo amin'ny alàlan'ny pataloha jeans vita amin'ny simika
Ahoana no hamerenana amin'ny laoniny ny jeans-nao ary ataovy mora sy haingana ny fon'ny haingon-trano.
Manakaiky ny fetin'ny ray ary anio dia mitondra hevitra mahafinaritra be aho, azontsika ampifanarahana hanome izany ho an'i Dada: andao jerena ny fomba fanaovana tsoratadidy
Horita miaraka amin'ireo mpanadio fantsona tena mora
Ny horita dia biby tian'ny ankizy ary amin'ity indray mandeha ity dia hasehoko anao ny iray ...
Fetin'ny ray manokana: boaty taratasy hatao amin'ny ankizy
Ahoana ny fomba famoronana boaty taratasy hatao amin'ny ankizy, miaraka amin'ny teny hoe "dad" ho an'ny fetin'ny ray na amin'ny fotoana hafa.
Brooch vita amin'ny tànana manokana
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba hanamboarana brooch saribakoly natao ho azy.
Ahoana ny fomba hanaovana garland kintana
Ahoana ny fomba hanaovana garland kintana handravahana ny efitran'ankizy, misy lasitra vonona hanonta
Amin'ity lesona anio ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana vazy romantika amin'ny alàlan'ny fampiasana siny fitaratra indray. Miaraka amin'ny,…
Fomba roa hanaovana tsipìka amin'ny tanimanga Fimo na polymer
Izahay dia manome anao ny dingana tsirairay amin'ny fomba roa hanaovana tsipìka miaraka amin'ny tanimanga Fimo na polymer, mety tsara amin'ny karazana haingo na manampy ny sarinao.
Fanilo miloko mampiasa siny fitaratra
Mianara mamorona lanternaly miloko amin'ny fampiasana indray siny fitaratra. Tonga lafatra ho an'ny terraces sy jiro fety.
Handravaka ny fampirimana amin'ny fingotra eva
Amin'ity asa tanana androany ity dia ho hitantsika ny fomba handravahana ny fampirimana amin'ny eva na foam rubber, ka hamorona ilay fampirimana manokana sy manokana.
Labozia haingon-trano miaraka amin'ny marbra
Ianaro ny fomba fanaovana an'ireny labozia haingon-trano ireny amin'ny fitaovana vitsivitsy. Izy ireo dia tena mora sy tany am-boalohany.
Haingo amin'ny varavaran'ny efitrano fandrian'ny ankizy
Fomba fanamboarana ravaka ho an'ny varavaran'ny efitrano fandrianan'ny zaza, amin'ny fampiasana baoritra sy baoritra miloko.
Manamboatra ny taratasinay fonosana izahay
Amin'izao asa tanana ankehitriny izao dia manamboatra ny taratasinay fonosana izahay, amin'ny fomba tena mahafinaritra raha manandrana manao azy amin'ny ankizy ianao dia azo antoka fa ho tian'izy ireo izany.
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity sary Retro ity izay hameno ny tranonao amin'ny fikitika voalohany.
Androany dia hanao taratasy 3D amin'ny fomba tena mora isika, fa taratasy cork fotsiny no mila an'izay amidy amin'ny bazaar
Fomba fanaovana fahatsiarovana omena ny bevohoka
Tsikelikely mba hanao fahatsiarovana anao am-boalohany ho fanomezana ho an'ny trano fiterahana.
Fomba fametrahana paty amin'ny pataloha
Androany dia asehoko anao ny fomba mahafinaritra hametahana pataloha amin'ny pataloha. Azo antoka fa tsy hiala io.
Ho hitantsika ny fomba fanamboarana fo karatra sy piozila hanomezana endrika romantika ny zoron'ny trano.
Ho hitantsika ny dingana tsikelikely hanodinana lakandrano manome endrika tsy manam-paharoa azy amin'ny fandokoana azy io hampiasaina indray ho mpamboly.
Mamadika vera ho fitoeran-dabozia misy washi-tape
Herintaona na roa taona lasa izay, tsy tadidiko tsara, nanjary lamaody ny kasety washi. Saingy,…
Handravaka ny fonenanao amin'ny finday
Tianao ve ireo trangan-telefaona tany am-boalohany ireo? Ity DIY ity dia efa nomaninay ho anao ny faran'ny herinandro izao, ...
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika tsikelikely ny fanaovana valopy taratasy voaravaka.
Garlandan'ny triangles vita amin'ny akanjo volom-borona
Lahatsoratra DIY momba ny fomba fanaovana garland miaraka amin'ny akanjo volom-borona.
Ahoana ny fomba hananganana fandaharam-potoana
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitanao ny fomba fandaminana fandaharam-potoana ary hanome azy endrika manokana.
Hazo krismasy tany am-boalohany
Ho hitantsika ny fomba fanamboarana hazo krismasy amin'ny fomba hafa sy tany am-boalohany mba hanomezana io fihetsika io izay tadiavintsika amin'ny haingon-trano ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
Karatra krismasy misy tsapa
Amin'ity asa tanana androany ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana karatra krismasy, amin'ny fanararaotana ireo sombin-javatra sasany tsapa amin'ny asa tanana hafa miaraka amin'ny endrika tsy manam-paharoa sy vita tanana.
Karatra krismasy misy mololo
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana karatra krismasy hiarahabana ireo olon-tiantsika amin'ity Krismasy ity
Amin'ity asa tanana androany ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana karatra krismasy maniry firariana fahasambarana amin'ity Noely ity.
Brooch kofehin-kiran'ny shirt
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanamboarana bokotra kofehy t-shirt ary hampiasana azy io ho famenon'ny akanjo sy hanaovana antsipiriany ho fanomezana.
Kitendry lakile ho an'ny lehilahy
Amin'ity asa tanana androany ity dia ho hitantsika ny fomba hanamboarana keychain miendrika lehilahy, tonga lafatra hanome zazalahy amin'izao fotoana izao.
Anjely nahatsiaro ho an'ny Noely
Amin'ity asa tanana androany ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana anjely tsapa handravaka ny tranontsika amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity.
Kisary misy akora simika
Amin'ity asa tanana ankehitriny ity dia ho hitantsika ny fomba hanovana boaty serealy ho lasa notepad tsara tarehy.
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana notepad ary ahatonga azy ho afaka manoratra ny lisitray na izay ilainay.
Amin'ity asa tanana androany ity dia hasehoko anao ny fomba fanaovana amboradara anarana amin'ny tanana izay antenaiko fa tena ilaina tokoa hanamboarana ireo tetikasa fanjairanao.
Amin'ity asa tanana ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana keychain tsapa, hahafahantsika mitazona soa aman-tsara ny fanalahidintsika.
Spyglass an'ny ankizy
Amin'ity asa tanana ankehitriny ity dia ho hitantsika tsikelikely ny fomba fanamboarana mpitsikilo mpitsikilo amin'ny fantsom-baoritra.
mamerina seza toy ny farafara alina
Fampianarana hampiasana indray ny seza toy ny latabatra amin'ny alàlan'ny fanampiana karazana harona noforonina tamin'ny lamba.
Saribakoly Cobweb ho an'ny Halloween
Amin'ity lesona ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana garlandy vatokely ho an'ny Halloween, ary handravaka ny fety Halloween na ny efitrano ao an-trano.
Spider ho an'ny Halloween
Amin'ity lesona ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana hala ho an'ny Halloween, manomboka amin'ny legioma iray. Asa tanana mora azontsika atao amin'ny ankizy.
Handravaka boaty voankazo.
Amin'ity asa tanana ity dia asehonay aminao ny fomba, manomboka amin'ny boaty frezy iray, afaka manova ny endriny izahay mba hatao haingon-trano.
Tehirizo kavina kely
Amin'ity asa tanana ity dia asehonay aminao ny fomba hitazomana kavina kely ary alahatra tsara izy ireo ary ho mora amintsika ny mandray azy ireo amin'ny mpanao firavaka.
Tsoratadidy misy clip
Amin'ity fampianarana ity dia azonao atao ny mijery ny fomba fanaovana tsoratadidy miaraka amin'ireo clip nataontsika tamin'ny vokatra tena tsara.
Stoking akanjo mpamosavy
Amin'ity lesona ity dia ho hitanao ny fomba fanovana ny tights sasany ho ba kiraro ho an'ny akanjo mpamosavy izay nataontsika tamin'ny firavaka be dia be.
Fampianarana hampiasa indray ny peratra soda. DIY tsotra azonao ampiharina amin'ny kojakoja tsy hita isa: fehin-tànana, rojo, fehikibo, sns.
Lahatsoratra momba ny fomba fanaovana bracelet na anklet misy volom-borona sy kofehy. Fitaovana DIY tena mora sy mahafinaritra ho an'ny endrika maro na fitafiana mihitsy aza.
DIY satroka volom-borona
Ataovy miavaka ny satroka amin'ny fitaovana vitsivitsy. Amin'ity DIY ity dia hanodina satroka isika ary hanome azy fiainana faharoa.
Kapa DIY amin'ny dantelina
Lahatsoratra momba ny asa tanana izay hianarantsika mamerina manamboatra kiraro ary hanome azy ireo fiainana faharoa miaraka amin'ny eritreritra kely ary amin'ny fomba tena izy.
Clutch vita amin'ny placemat
Manaova kitaponao na kitapo amin'ny fomba mora indrindra eran'izao tontolo izao. Manaova tsiranoka amin'ny alàlan'ny placemat, lakaoly fitomboka amin'ny tombo-kase, ary firavaka flap
Winnie pooh vita amin'ny fimo
Andininy hanaovana Winnie the Pooh miaraka amin'ny tanimanga polimer. Asa tanana mety hatao amin'ny fianakaviana na raha tianao ny mamolavola tanimanga polimer.
Anklet vita amin'ny lamba
Lahatsoratra DIY izay misy lesona momba ny fomba fanaovana anklet amin'ny alàlan'ny fanodinana lamba na T-shirt taloha. Mora, mahafinaritra ary tsara tarehy.
Garland miaraka am-po fingotra EVA
Lahatsoratra DIY momba ny fomba fanamboarana satro-boninahitra am-po vita amin'ny fingotra EVA. Mety amin'ny ravaky ny fahavaratra indrindra sy amin'ny fety mafana indrindra.
Ahoana ny fomba hanaovana minion tanimanga polimer
Lahatsoratra natokana ho an'ny sarimihetsika Minions, ao no ahitanao tutorial hanaovanao minion mahafinaritra amin'ny tanimanga polimer.
Akanjo fahavaratra vita amin'ny balaonina sy kofehy t-shirt
Fampianarana momba ny fomba fanaovana garland miaraka amin'ny balaonina sy lamba. Izy io dia lesona tsara indrindra ho an'ny haingo amin'ny fety.
Amboary indray ny siny fitaratra ho an'ny fahavaratra
Tutorial DIY hatao amin'ny fahavaratra. Mety amin'ny haingon-trano amin'ny fety dobo sy barbecue. Miaraka amin'ny siny fitaratra vitsivitsy dia hamorona mpihazona labozia lehibe izahay.
Tavoahangy fitaratra nolokoana tamin'ny loko rano
Fampianarana hanodinana tavoahangy sy handravahana azy amin'ny loko hosodoko izay hamboarintsika amin'ny verinia vera.
Satro-boninkazo sy satro-boninkazo kofehy
Lahatsoratra DIY izay mampiseho ny fomba hanaovana satro-boninkazo DIY tanteraka sy tonga lafatra hitafy io vanin-taona fahavaratra io.
Anklet misy lakolosy sy firma amin'ny fahavaratra
Anklet misy lakolosy sy firma hanaovana fahavaratra. Fampianarana mora sy mahafinaritra hanamboarana sy hamoronana fanangonana kanto ny kitrokely fahavaratra.
Asehoy ho akanjo sy akanjo ambony ny akanjo
Amboary ny akanjo bodycon ho tapa-roa. Ataovy ambony sy zipo amin'ny fotoana fohy sy mora ny tenanao.
Manaova rojo DIY ao anatin'ny dimy minitra
Tutorial hanamboarana rojo ao anatin'ny dimy minitra latsaka. Tena mora sy manaitra modely rojo azontsika atao amin'ny fitaovana vitsivitsy sy fotoana kely.
Tiara Indiana misy volom-borona miloko
Tiara indianina hilalao sy hiakanjo. Namboarinay tamin'ny penina baoritra sy taratasy miloko. Hahafinaritra sy hiala voly.
Mpialokaloka DIY mahafinaritra
Ahoana ny fomba hahamety ny morontsiraka tsapa amin'ny fotoana fohy ary hamaritana ny toetran'ny latabatrao. Amin'ity fampianarana ity dia ho hitanao ny valiny.
Sarin'ny sary namboarina ho an'ny efitranon'ny ankizy
Sarin'ny sary namboarina ho an'ny efitranon'ny ankizy, na zazavavy na zazalahy, dia azontsika atao ny manamboatra sary sasany amin'ny dingana vitsivitsy.
Mini vilany fanodinana siny seramika
Siny kely ho an'ny poara kely misy prickly, cacti na hanombohana ny asan'ny bonsai, izay tianao indrindra, ary koa ny vera fanodinana vera na tavoahangy yaorta vita amin'ny seramika.
Peratra telo miorina amin'ny hevitra mitovy
Anio izahay dia manoro hevitra anao ny hilalao tanimanga, indrindra amin'ny tanimanga polimer. Mihamafy ao anaty lafaoro ary mahazaka kokoa. Manolotra andiana peratra ho an'ny vao manomboka izahay.
Fonosin'ny fo amin'ny lamba fluffy
Karipetra fy mahafinaritra miaraka amina lamba fluffy amin'ny lafiny iray ary lamba landihazo etsy an-daniny. Maitso maivana hifaneraserana sy handravahana ny zoro ankafizinay.
Mpihazona dantelina lamba
Ny mpihazona lamba vita amin'ny lamba dia ny famenony tsara indrindra raha atambatra amin'ny akanjon'ny zaza na ho fanomezana ho an'ny reny bevohoka na zazakely.
Doudou kely misy marika.
Doudou kely homena na ho an'ny zazakelintsika no kilalao mety indrindra ho an'ireo ankizy kely tia marika, lamba ary loko.
Peratra ankizy miaraka amin'ny fimo fuguritas
Peratra ankizy misy sarivongana fimo miloko sy maro karazana, antsipiriany iray tany am-boalohany sy mahafinaritra homena amin'ny fankalazana fitsingerenan'ny andro nahaterahana na fety.
Voninkazo sy poleta fantsika
DIY ny fomba fanamboarana voninkazo misy tariby alimo sy poloney. Mora sy tsara tarehy, izy ireo dia tonga lafatra handravahana na ho toy ny kojakojam-bolo. Ho tianao izy ireo!
Kitapo fanodin-drakitra azo alaina miaraka
Voahangy volo azo lalaovina, eny! miaraka amin'ny ranomainty sy marika kely dia azontsika atao ny mamerina miverina amina kapoaka fitehirizana ary mamadika azy ireo ho kilalao tena mahafinaritra
Piraty namboarina tamin'ny dantelina
Ny piraty taloha na manapaka jeans dia mivadika piraty mahafinaritra sasany namboarina tamin'ny dantelina. Mba hanomezana fiainana faharoa azy ireo.
Ahoana ny fomba fanaovana raozy amin'ny FIMO
Andininy fanombohana DIY tanimanga polimer, amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana raozy amin'ny fomba tena tsotra ary manome valiny tena tsara.
Mamerina ny tranon'ny tovovavy sasany
Ny famerenana amin'ny laoniny ny latabatra sasany efa tonta dia azontsika atao ny manohy mampiasa azy ireo amin'ny fanaovana ny ankamaroany ary manao azy ireo namboarinay tamin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo ny mikasika anay
Garland ho an'ny fety misy taratasy crepe
Item DIY mety tsara amin'ny fety. Amin'ity lesona ity dia hianarantsika ny fomba fanaovana garland miaraka amin'ny taratasy crepe mora sy haingana. Tonga lafatra amin'ny fety minitra farany.
Magnetsaka mahery no mitazona ny zava-drehetra ho an'ny vata fampangatsiahana.
Ny andriamby mahery dia tena ilaina mba hahafahana mitazona ny taratasintsika rehetra ao anaty vata fampangatsiahana na ho haingon-trano fotsiny na ho fanomezana.
Miara-kofehy amin'ny kofehin'ny T-shirt sy crochet amin'ny endrika boribory
Lahatsoratra DIY izay mampifangaro ny crochet amin'ny lamba. Amin'ity teknika ity dia afaka manao kojakoja tsy voatanisa ho an'ny trano isika. Rugs, placemat, morontsiraka ...
Volom-bolo voaravaka fitaovana samihafa.
Ny volo volo namboarin'ny tenantsika, no famenon-tsakafo mety indrindra hampiakarana ny volonay sy hankafizantsika ny toetr'andro sy ny hafanana mafana ankehitriny.
Pejy fanoratana miaraka amin'ny tadiny sy vakana
Tsoratadidy vitsivitsy mora sy tsara tsara miaraka amin'ny kofehy sy vakana miloko, hampiasaina ao am-pianarana miaraka amin'ny kahie, kahie na bokintsika. Manome koa ho fanomezana.
Album ho an'ny zaza mampiasa ny technique Scrapbooking
Album ho an'ny zaza vita amin'ny alàlan'ny teknikan'ny Scrapbooking. Sombiny tsara omena an'io reny miandry ny zanany na ho an'ny zaza vao teraka.
Trano vorona vita amin'ny baoritra ronono.
Trano vorona vita amin'ny baoritra misy ronono, tsy misy tsara kokoa ampiasaina indray sy manodina. Tian'ny ankizy ny tranom-borona vita amin'ny baoritra.
Zipperless cushion fonony amin'ny lamba vita pirinty.
Saron-tsolika vita amin'ny lamba vita pirinty tsy misy zipper, famenon-tsakafo mety indrindra handravahana ny zoron'ny tranonay na hanomezana olona manokana.
Bandana bib amin'ny lamba vita pirinty ho an'ny zazakely.
Biby vita amin'ny lamba bandana vita pirinty nataontsika ho an'ny zazakelintsika na omena ny zanakalahintsika, zanak'olo-mpiray tam-po, zanak'olo-mpiray tam-po, sns. Tena mora ny manao.
Tsinontsinona nolokoina ho an'ny ankizy
Ny kapaoty vita amin'ny tanana tsara tarehy dia fanomezana tsara indrindra ho an'ny zanatsika na tsy dia tanora loatra. Afaka manamboatra ny kirarontsika araka izay tiantsika indrindra izahay.
Fanalahidy manokana, misy fitaovana samihafa
Ny fanalahidy manokana dia nanjary fahatezerana rehetra, ary mora ny manao azy. Misy teknika sy fitaovana maro azontsika ampiasaina mba handravahana ireo lakilentsika.
Plastimake, ny plastika azonao modely
Lahatsoratra momba ny Plastimake vaovao. Plastika iray novolavolaina indray mandeha nafanaina ary rehefa mafana izy dia mafy be. Mety tsara amin'ny asa tanana.
Handravaka amin'ny pompom sy ny fomba fanamboarana azy ireo
Ny fanaingoana amin'ny pompom dia tsotra be satria manana fitaovana sy teknika maro hanamboarana azy ireo izahay ary afaka handravaka izay hetsika misy amin'ny pompom.
Kitapom-bolan'ny ankizy misy haingam-pandeha sy haingon-trano
Kitapom-bolan'ny ankizy tsy misy fangarony. Tena mora ny mampihatra sy mampiasa ny fanidiana ny zazavavy. Izy io dia asa tanana tsara tarehy atao amin'ireo ankizy kely ao an-trano.
T-shirt vita amin'ny tànana misy sary ataon'ny ankizy
T-shirt vita amin'ny tànana misy sarina ankizy dia fanomezana tena tsara ho an'ny ankizy kely ao an-trano. Fametrahana sy fikolokoloana ho an'ity fanomezana tonga lafatra ity.
Tablecloth misy vakana
Tablecloth karazana mpihazakazaka ambony latabatra, voaravaka vakana (karazan-kazo maro loko) sy kofehy landihazo matevina, mamerina famolavolana voninkazo fototra.
T-shirt nolokoana savoka
Ataovy ho anao ny fironana hanamboarana t-shirt misy savoka miloko. Amin'ity fampianarana ity dia hianarantsika ny manonta T-shirt mora sy ara-toekarena.
Clips voaravaka tsipìka sy pompom-boninahitra miloko
Ny haingon-tsarimihetsika voaravaka dia ny asa-tanana tonga lafatra mba hamboarina ireo rakipeonao ary hanome azy ireo fikitika tokana. Mamorona rakipeo haingo anao manokana ary ataovy miavaka sy tsy mitovy izy ireo.
Tanimanga polimer, FIMO na paty famolahana
Miaraka amin'ny tanimanga polymer, FIMO, afaka manao pendants tsara tarehy miendrika bera mahafatifaty isika mba homena ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zaza.
Mpandamina ho an'ny rojo sy kitapo misy fanantonana
Fampianarana momba ny fomba handaminana kojakoja sy hametrahana azy ireo amin'ny fihantonana. Ity DIY ity dia hanampy anao handamina ny tenanao mba hanananao hatrany izay tadiavinao.
Voninkazo haingon-trano vita amin'ny bokotra mahatsikaiky
Voninkazo haingon-trano misy bokotra handravahana ny efitrano rehetra na hanomezana azy ho toy ny tany am-boalohany ary mora hamboarina amin'ny antsipiriany. Miaraka amin'ny fitaovana tsotra sy tsara tarehy.
Pompero voaravaka hanaovana savony
Miaraka amin'ity pompero voaravaka ity sy ny mifangaro hanamboarana savony savony tonga lafatra, dia hanana fahafinaretana mandritra ny ora maro isika amin'ny vidiny tena ambany. Tian'ny ankizy ny milalao.
Savony Bubble, ny fifangaroana lafatra
Vovon-tsavony. Inona no mahafinaritra kokoa? Amin'ity lesona ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana ny mix tanteraka mba hanamboarana mora foana ny savony savony lehibe sy maharitra.
Fehin-tànana vita tanana amin'ny zazavavy
Fehin-tànana ho an'ny zazavavy, ny lafatra famenon'ity lohataona lohataona ity. Amin'ity fampianarana mora ity dia hahafahanao manao ny Bracelets rehetra ho an'ny zazavavy arosonao.
Mponina morontsiraka nahatsapa loko
Miaraka amin'ireo morontsiraka nahatsapa ireo dia azonao atao ny manome fifandraisana am-boalohany sy mamorona ny hetsika na fisakafoanana hariva. Felt Coasters no famenon-jaza mety indrindra amin'ny latabatrao.
Pyrography boaty misy sary tianao
Tutorial momba ny fomba hisamborana sary fisaka misy pyrograph eo amin'ny boaty handravahana na hitahirizana zavatra.
Notebook nilahatra tamin'ny lamba
DIY momba ny fomba handrakofana kahie amin'ny lamba. Ataovy personalize ny kahie isan'andro ary ampio ny originality amin'ny naotinao manokana.
Kavina voninkazo sy jiro
Lahatsoratra DIY momba ny fomba fanamboarana voninkazo voninkazo vita amin'ny taratasy crepe. Ho an'ity DIY ity dia hampiasa satro-boninahitry ny jiro sy voninkazo ary kasety Krismasy izahay.
Miparitaka miaraka amina santionana amina lamba fangarony, azo ovaina ho fonosana duvet, misy singa mora vidy tokoa, ary azo tanterahina ao anatin'ny fotoana fohy.
Gorjuss Keychain vita tanana
Gorjuss Keychain manokana, namboarina manokana ary miaraka amina fitaovana sy teknika tiantsika indrindra, hitondra ny lakilenay aminà mpihazona lakile vita tanana tsara tarehy.